isbitaal casri ah oo dhismihiisa laga bilaabay magaalada Jowhar +Sawiro | Wardoon Wardoon.net - Somali News
isbitaal casri ah oo dhismihiisa laga bilaabay magaalada Jowhar +Sawiro
Hay’ada Al raxma Alkheyriya ayaa ka bilowday dhisme Isbitaal casri ah magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Sh/dhexe iyadoo mas’uuliyiin ka socota maamulka degmada Jowhar iyo maamulka gobolka Sh.dhexe ay ka qeybgaleen bilowga dhismaha isbitaalkan.
Dhismaha isbitaalkan oo noqon doono mid si casri ah looga hirgeliyo gobolka Sh/dhexe ayaa ka mid noqon doona isbitaalada ka jira gobolka kuwaasoo haatan gargaar caafimaad u qabta shacabka ku nool gobolka Sh/dhexe iyo qaar ka mid ah gobolada deriska la ah gobolka.
Sh.Abuukar Xasan Cali kusimaha guddoomiyaha gobolka Sh/dhexe ayaa u mahadceliyay hay’ada Al Raxma oo maalgelinaysa isbitaalkan cusub ee laga hirgelinayo magaalada Jowhar.Ku simaha guddoomiyaha gobolka ayaa ugu baaqay shirkada fulinaysa dhismaha isbitaalka inay dedejiyaan isla markaana ay dhisaan isbitaal wax u tari kara shacabka Soomaaliyeed.
Dhismaha isbitaalkan ayaa waxaa uu noqonayaa mid ay ka faa’ideysan karaan shacabka gobolka Sh/dhexe iyo gobolada deriska la ah. Waxana uu ku soo beegmayaa hirgelinta isbitaalkan baahi weyn oo dhinaca caafimaadka ah ee ka jirta gobolka.
Magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Sh/dhexe ayaa waxaa horaantii sanadkan soo booqatay wasiirka caafimaadka ee dowlada Federalka Soomaaliya waxayna u ballanqaaday shacabka gobolka inay dowladu ay dadaal xoog leh u geli doonto sidii loo dabooli lahaa baahida caafimaad ee ka jirta gobolka.